काठमाडौँ, साउन ११ गते । साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन शुक्रवार मन्त्र तथा सीप प्रदान गर्ने गुरु र गुरुआमाप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइँदैछ । संस्कृतमा ‘गु’ को अर्थ अन्धकार र ‘रु’ को अर्थ चिर्ने भन्ने हुन्छ । अन्धकारलाई चिरेर ज्ञानको उज्यालो प्रदान गर्ने दिनका रूपमा गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ ।
अमालकोट कचहरी कार्यालयका द्वारे पूर्ण डङ्गोलका अनुसार पशुपतिनाथका पुजारीले गुरु दक्षिणामूर्तिको पूजा अर्चना गरेपछि यहाँ गुरु पूर्णिमाको उत्सव सुरु हुने गर्छ ।
साउन शुक्ल पूर्णिमाको मध्यरातमा शुक्रबार खग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्दैछ । सूर्य र चन्द्रको वीचमा पृथ्वी सीधा रेखामा रहँदा पृथ्वीको छायाँ चन्द्रमामा पर्ने यो ग्रहण काठमाडौँमा राति १२ः०९ मा सुरु भएर बिहान ४ः०६ मा समापन हुन्छ । ग्रहण ३ घण्टा ५७ मिनेटसम्म रहन्छ ।
पृथ्वीको छायाँले चन्द्रमालाइ पुरै ढाक्ने भएकोले यो ग्रहणलाई खगोलशास्त्रमा खग्रास ग्रहण भनिन्छ । मकर राशीमा ग्रहण लाग्ने भएकाले मकर कन्या र वृष राशिकालाई यो ग्रहण अशुभ छ ।
मेष, सिंह, वृश्चिक र मीन राशीकालाई शुभ र अन्यलाई सामान्य फल दिने खालको ग्रहण रहेको ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौला बताउनुहुन्छ ।
पशुपतिनाथलाई भने ग्रहणको दोष लाग्दैन भन्ने भनाइ छ । अमालकोटका द्वारे पूर्ण डङ्गोलका अनुसार ग्रहण भएपनि पूर्णिमामा हुने महास्नानको भोग नाथलाई चढाइन्छ । भव्यताका साथ महास्नान हुन्छ । ग्रहण समापनपछि स्नान दान गर्दा राम्रो हुन्छ । ग्रहणका बेला भोजनका साथै यौनसम्पर्क गर्नु उचित नहुने डा. सिटौलाको सुझाव छ ।